Yusuf Garaad: July 2017
Labada Madaxweyne ku Xigeen ee Jubbaland
Bishaan horraanteedii waxaan ka mid ahaa xubnaha Golaha Wasiirrada ee booqday magaalada Kismaayo. Waxay ahayd go’aanka Ra’iisal Wasaaraha in Goluhu fadhigiisa Khamiislaha ah uu ku yeesho Kismaayo.
Markii aan dib uga fekeray waxay ila noqotay markhaati in aan ka xasdayo Madaxda iyo dadweynaha Kismaayo haddii aanan bulsha weynta Soomaaliyeed la wadaagin wanaagga aan soo arkay.
Kismaayo markii iigu dambeysay waxay ahayd 2014 oo aan ka qeyb galay munaasabad lagu qabtay garoonka dayaaradaha, saacado yar ka dibna waan ka soo laabtay.
Laakiin magaalada oo aan gudaha u galo waxaa iigu dambeysay 1995 markaas oo magaalada aan ku soo booqday General Morgan oo gudaha magaalada ka talinayay.
Waxay ahayd magaalo kooban, jawi colaadeed ku jirta. Nolosheeduna ay hooseeyso inkasta oo markaas loo arkayay in ay soo yara kabaneyso.
Markaas ka hor magaalada waxaa iigu dambeysay 1987 oo aan seexday Hotel Waamo oo ay lahayd Dowladdu. Wuxuu ahaa Hotel dalxiis oo ay maamusho Wasaaradda Dalxiisku.
Miiskii ugu qurxoonaa ee tan iyo markii la magacaabay uu Golaha Wasiirradu shirkiisa ku qabto wuxuu ahaa miiskii yaallay guriga Martida ee Kismaayo.
Wuxuu yaallaa gudaha guriga Martida. Waa guri ka kooban xero weyn oo oodan oo beero nasasho ku yaallaan, gudahana uu ka dhisan yahay guri weyn oo dhowr dabaq ah iyo kuwo yaryar. Waxay xeradu kaabiga ku haysaa badweynta India oo jamalka keliya ayaa qeybiya guriga iyo badda.
Neecawda badda ka soo dhacaysa iyo hugunka ka baxaya hirka marka ay baddu kacsan tahay waxay ku geynayaan jawi dabacsan oo waxyaabaha qaar ku illowsiin kara.
Gurigaas iyo qalabka yaalla waxaa la ii sheegay in aan lagu dhisin lacag ajnabi bixiyay. Waa mashruuc lagu hirgeliyay isku tashi iyo isku kalsoonaan.
Madax iyo dadweyne waxaa naloo muujiyay soo dhoweyn diirran, qaddarin iyo oggolaasho la oggol yahay lana weheshanayo Dowladda Soomaaliya.
Waxaan arkay madax is oggol, Madaxda Qaranka iyo Dowladda dhexe oo dhanna oggol. Waxaan arkay Dowlad Goboleed garab iyo gaashaan u ah Dowladda Federaalka isuna aragta in ay iyadu ka mid tahay.
Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa Madaxweynaha, labada Madaxweyne ku xigeen, dhammaan Wasiirrada iyo ciidanka safnaa garoonka aan ka soo degnay ilaa iyo guriga Martida oo xarun KMG ah noo noqday. Ciidankaasi waxay qorraxda iyo dhaxanta u taagnaayeen in ay ilaaliyaan Madax aanay toos u aqoon laakiin ay Dowladnimo ka dhinsanayaan.
Ugu dambeyn waan ka mahadcelinayaa xalwa Kismaayo haddiyad la ii siiyay.
Posted by Yusuf Garaad at 18:32:00
Sawirka waxaa qaaday Adow Mohamed
Galabta waxaan magaalada Juba, caasimadda Sudan-ta Koofureed uga qeyb galay shir ay Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee IGAD ay kula kulmeen wakiillo ka socda bulshada rayidka ah ee dalkan, goobjoogna ay ka yihiin wakiillo ka socda beesha caalamka.
Danjirayaasha Mareykanka, Norway, UK, China, Germany, Japan, Switzerland, Qarammada Midoobay, Midowga Afrika iyo Midowga Yurub ayaa fadhiyay.
Kulanka waxaa igu wehliyay Agaasimaha Waaxda Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Cabdilatif Maxamuud (gar madow) iyo Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Juba, Xuseen Xaaji (gar cad) iyo diblomaasiyiinta Safaaraddeenna Juba.
Haddana waxaan ka soo laabtay casho uu Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Sudan-ta Koofureed uu u sameeyay Wasiirrada dalalka xubnaha ka ah IGAD iyo wufuuddooda.
In saaka aan ka soo tooso Muqdisho, howl aan qabsado, galabtana aan ka qeyb galo shir ka dhacaya Sudanta Koofureed iima suurta gasheen haddii aan la joojin sii maritaankii Wajeer, sababta oo ah kamaan soo gaareen dayaarada kowda ka kacaysa Nairobi. Wajeer waxay khasab ka dhigi lahayd in aan maalin ka hor ka dhoofo Muqdisho oo aan u hoydo Nairobi inta aanan u gudbin Juba.
Posted by Yusuf Garaad at 19:57:00
Soomaaliya ayaa Ethiopia kala wareegtay Maxaabbiis
Waxaan caawa aad ugu faraxsan ahay in ay Muqdisho ka soo degeen 114 Maxbuus oo Soomaali ah oo wadahadal aan la yeelannay Madaxda Ethiopia ka dib laga soo daayay jeelal ku yaalla Ethiopia.
Iyaga oo aad u faraxsan ayaa basas looga qaaday gegida dayaaradaha Aden Cadde.
Dowladda Ethiopia oo shuruud la'aan ku aqbashay codsiga Madaxda Soomaaliya ayaan uga mahadcelinayaa gaar ahaan Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dowlad-degaanka Ismaamulka Soomaalida.
Aad ayaan ugu farxay marka aan arkay sida ay dhallinyarada laga soo daayay xabsigu ay ugu faraxsan yihiin in ay dalkooda ku soo nabad laabteen.
Waxaa socda dadaal xoog leh oo ay Dowladda Soomaaliya u dhan tahay oo aan rajeynayo in uu mustaqbalka dhow u suurta geliyo Dowladdu in ay la soo wareegto Maxaabbiis Soomaaliyeed oo ku xiran dalal kale oo dhowr ah.